यी ३ राशिहरुले पाएका हुन्छन् सानै उमेरमा धेरै धनी बन्ने भाग्य, छिट्टै गर्छन् प्रगति ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/यी ३ राशिहरुले पाएका हुन्छन् सानै उमेरमा धेरै धनी बन्ने भाग्य, छिट्टै गर्छन् प्रगति !
र अन्तिममा धनु राशि , यो राशि हुने मानिसहरु पनि अत्यन्तै सालिन स्वभावका मिहेनती हुनाले प्रशस्त धन कमाउने हुन्छन् । किनभने हरेक काम गर्दा नया नया तरिका अपनाएर काम गर्नुको साथै थोरै पैसालाई जम्मा गरेर धेरै बनाउने हुन्छन् ।
एक्कासी ह्वात्तै घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति ?